विश्वविद्यालय सुधारको बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार
पूर्वहरूलाई आफू पुनश्च प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्ने भन्ने लाग्छ । उनीहरू अन्यत्रजस्तो विशेष दायित्व निर्वाह गर्न मन्त्री बन्न चाहँदैनन् । मन्त्री बन्दा आफ्नो घटुवा भएको ठान्छन् । पूर्वहरू यदि मन्त्री भइदिए क्या गज्जब हुन्थ्यो ।
असार २६, २०७७ श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम
उनले सुबिस्तापूर्वक पूरै पाँच वर्ष कटाउनु असम्भवजस्तै छ । किनभने उनले तयार गरेको पार्टी गठजोड नै त्यस्तै छ, जहाँ एक से एक महत्त्वाकांक्षी छन् । एक से एक प्रतिद्वन्द्वी । तीन जना त पूर्वप्रधानमन्त्री छन्; माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल तथा जसै गरी प्रधानमन्त्री भइछाड्ने संकल्प लिएर बाँचेका पूर्वगृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम । यति धेरै महत्त्वाकांक्षीबाट घेरिएर बस्दा निश्चय पनि असुरक्षा हुन्छ र ओलीलाई त्यो त छ नै । साथै, उनी आफ्नै व्यक्तित्व व्यवस्थापनमा समेत अपुरो देखिन्छन् ।
अहिले सबैभन्दा बढी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू भएको पार्टी नै नेकपा हो । उहिल्यैका राजाका पालाका र अरू पार्टीका रथी, अर्धरथी र दिग्गज त धेरैजसो स्वर्गवासी भइसके । नेपाली कांग्रेसमा जम्माजम्मी एक जना बाँकी छन्, शेरबहादुर देउवा । चारपटक प्रधानमन्त्री भएका (तीनपटक निर्वाचित, एकपटक गोरखाका राजाको टीको थापेर बनेका) र अझै पाँचौंपटक पनि बन्ने अभिलाषा राखेर बसेका । साथै कतै उनलाई कुनै ज्योतिषीले सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने जोग (योग) छ पनि भनेका छन् भनेको सुनिएको हो । उनको पार्टीका सभापति उनै हुन् र पूर्वप्रधानमन्त्रित्वमा संकल्पका साथ एकाधिकार कायम गरेर बसेका छन् । फेरि मौका आए आफू रहुन्जेल अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन उनी कृतसंकल्प छन् । किनभने अरू नेता उनको चटक हेर्ने रमिते हुन् । कथं नेकपा फुटिहाले देउवाबाट उनका भविष्यवक्ता ज्योतिषी पुरस्कृत हुने सम्भावना प्रबल छ । आश गरेर बसेका आशे, पिलन्धरे पात्रहरू प्रशस्तै छन् । त्यस्तो भइदिए मधेसवादीका पनि दिन फर्किन्थे भन्ने मधेसपन्थी मनग्गे छन् ।
कुनै बेला नेपाल मुलुक नै एकदमै धेरै पूर्वप्रधानमन्त्री भएको, दोहोर्‍याई–तेहर्‍याई प्रधानमन्त्री बन्न ढुकेर बसेका बेरोजगार नेता भएको देशका रूपमा चिनिन्थ्यो । पूर्वपञ्चहरू, राजकृपाप्राप्त पात्र राजानुयायीका साथै बूढानीलकण्ठदेखि गोदावरीसम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग साक्षात्कार हुन्थ्यो । कोही सानोगौचर र कोही भने मालीगाउँमा भेटिन्थे । कांग्रेसमा २०४६ को जनआन्दोलनपछि जम्मा चार जना प्रधानमन्त्री भए; कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा । तीन नेताको देहावसान भइसक्यो । सात सालपछिका मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई पनि जोड्ने हो भने कांग्रेसबाट मात्र छ जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।
अझ २०१५ सालको चुनाव गराउन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका सुवर्णशमशेरलाई पनि जोड्दा कांग्रेसले सातपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो । ती सातमा ‘पूर्व’ का रूपमा कांग्रेसमा अब देउवा मात्र बाँकी छन् । यता आएर भने कालबेला फेरिएको छ, विशेष गरेर २०६२/६३ पछि । अधिकांश पूर्व बनेका अनुहारहरू नेकपामा थुप्रिएका छन्Ù सात महिना, नौ महिना, डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका पूर्वहरू । वास्तवमा पूर्वहरूलाई पुनःपुनः आफू पुनश्च प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्ने भन्ने लाग्छ । उनीहरू अन्यत्रजस्तो विशेष दायित्व निर्वाह गर्न मन्त्री बन्न अथवा अरू कुनै विशेष दायित्व लिन चाहँदैनन् । मन्त्री बन्दा आफ्नो घटुवा (डिमोसन) भएको ठान्छन् । पूर्वहरू यदि मन्त्री भइदिए क्या गज्जब हुन्थ्यो ! जस्तै अहिले नै यदि परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यभार माधवकुमार नेपालले निर्वाह गर्ने हो भने देशको परराष्ट्र सम्बन्धमा तात्त्विक फरक पर्थ्यो र यसबाट भारतसित बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न धेरै मद्दत हुन्थ्यो । किनभने उनमा कूटनीतिक कौशलका साथै भाषिक ज्ञान पनि छ । उनी हिन्दी हिन्दुस्तानी लवजमै प्राञ्जल बोल्न सक्छन् । तर उनी परराष्ट्रमन्त्री बन्दा आफू घटेको, होचिएको ठान्छन् । उनको जिकिर आफू प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्छ भन्ने रहन्छ ।
त्यस्तै झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल गृह र रक्षाजस्ता मन्त्रालय सम्हाल्न राजी भए देशको यो दुर्दशा पक्कै हुने थिएन । साथै झन्डै नेकपामा समावेश भएर बिच्किएका बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बनेका भए देशको अर्थतन्त्र अहिले यति दुर्दशाग्रस्त पक्कै हुने थिएन । परराष्ट्रमा माधव, झलनाथ खनाललाई गृह मन्त्रालयको अभिभारा र दाहाल रक्षामन्त्री भएका भए ओलीको अहंकार त मत्थर हुन्थ्यो नै, उनलाई गफ नभएर काम गर्नुपर्ने दबाब हुन्थ्यो । उनी सतर्क रहेर काम गर्थे । उत्तरदायी बन्थे । यस्तो अनियन्त्रित त पक्कै हुन पाउने थिएनन् । उनको सातौं आकाशमा विचरण गरिरहेको अहंकार स्वतः मत्थर हुन्थ्यो । सरकार सञ्चालनको टिम बडो सशक्त हुन्थ्यो ।
यहाँ उठाइएको विषय कतिपयलाई ख्याल–ठट्टाजस्तो लाग्न सक्छ । तर त्यस्तो होइन । यो कसैप्रति व्यंग्य पनि होइन । नेताको घटुवा गराएर आत्मरति गर्न खोजेको त झन् किमार्थ होइन । देशमा अमनचैन, छिमेकसित सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने काम गर्नलाई वास्तवमा व्यक्तित्वहरूका ‘इगो’ को व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विशेष गरेर पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरूको इगो ज्यादै खतरनाक हुन्छ । किनभने राम्रो औषधोपचार पाएका छन्, शरीरमा थोरबहुत बर्कत छ, अभिलाषा र आकांक्षा सक्रिय छन् उनीहरूका पनि । तर काम छैन । कुनै सृजनशील काम गर्नुपर्ने चुनौती छैन । काम भनेको त्यही पार्टी छ, पार्टीमा गुटबाजी छ । आसपासमा ‘प्रधानमन्त्रीज्यू त फेरि प्रधानमन्त्री बनिबक्सनुपर्छ’ भन्ने चाकडीबाजहरूको झुन्ड छ । (चाकडीबाजहरू पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री नै भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छन् ।)
त्यसैले मनमनै लाग्दो हो नि त झलनाथलाई पनि फेरि प्रधानमन्त्री भएर बालुवाटार–सिंहदरबार गर्ने रहर । अध्ययनशील छन्, क्षमता पनि छ, पार्टीका महासचिव पनि भइसकेका माधव नेपाललाई किन नहुनु फेरि बालुवाटारमा डेरा गर्ने इच्छा ! दाहालका विषयमा सबै जानिफकार छन्; विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट आएका, गणतन्त्रको एजेन्डा स्थापित गर्ने नेता आफू हुँदाहुँदै स्वयं प्रधानमन्त्री निरन्तर भइरहन पाउनुपर्नेमा त्यो त छैन नै, पार्टीमै यथोचित स्थानसम्म नपाउनु छ । हेपिनु छ । यसरी हेर्दा वास्तवमा नेकपाको अहिलेको समस्या इगोको समस्या हो ।
इगो व्यवस्थापन व्यक्तित्व व्यवस्थापनको समस्या हो र त्यो इगोको आगोमा घिउ थप्ने काम स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीकै बिझाउने वाणीले गर्ने गरेको छ । ठूलो पदमा आसीन भइसकेपछि जिम्मेवारी पनि ठूलै हुन्छ । आफ्नो इगोलाई सम्हालेर अरूको इगोलाई सम्बोधन गर्ने नेताहरू सफल हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले राज्यकार्य सम्हाल्नु त पदीय कार्यादेशभित्रै पर्छ । त्यसका अतिरिक्त व्यक्तित्वहरूको व्यवस्थापनमा पनि संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । नभइदिँदा समय–असमय असन्तुष्टिका बाढी आउँछन् ।
आउनु स्वाभाविक हो । ठूलो पदमा त ओली छँदै छन् नि ! उनले आफ्ना समवयी र आफूभन्दा पाका नेतालाई सम्मान गर्दा, उनीहरूसमक्ष आदरभावले प्रस्तुत हुँदा उनको पद कतै जाँदैन, बरु अरू मर्यादित हुन्छ । तर यी कुरा ओलीका कानैमा भन्न सक्ने समझ भएकाहरू उनका समीप छैनन् भन्ने देखिन्छ । नियुक्तिका रूपमा ओलीबाट पाएको भाँडो पो कतै फुत्किन्छ कि भनेर होमा हो मिलाउने पदधारीले कसैको पनि भलो कहिल्यै गर्दैनन् ।
यो ब्रह्माण्डमा कसैको पनि ज्ञान पूर्ण छैन । ओलीको हुने कुरै भएन । तर उनलाई त्यस्तो लाग्दैन । उनलाई लाग्छ, सबै ज्ञान गुटमुटिएर उनकै मस्तिष्कका शरण परेको छ । त्यसैले ओलीले अरू औसत प्रधानमन्त्रीले जस्तै चाकडीबाजलाई नै शुभचिन्तक ठानेका छन्, तुष्टीकरणलाई सफल राज्य सञ्चालन मानेका छन् । नालायकहरूको संरक्षणलाई आफ्नो योग्यता मानेका छन् । त्यसैका फलस्वरूप दोषपूर्ण दृष्टि, विषयविज्ञहरूको परामर्शबेगरै चिकत्सकीय सम्भाषण गर्न उत्प्रेरित भएका हुन् । ब्रह्माण्डसम्बन्धी, सृष्टिसम्बन्धी ज्ञान अझै रहस्यकै रूपमा रहेको छ । तर ओलीलाई लाग्छ सायद, अरूका लागि रहस्य होला, ज्ञान उनी आफैंसँग छ । जबकि, यस्तो लाग्नु स्वास्थ्यकर मानिँदैन किनभने मानिसको संज्ञानात्मक क्षमताको पनि सीमा छ । तर दुर्भाग्यवश, संज्ञानात्मक सीमाको जानकारी उनलाई कसैले दिँदैन । दिनु जरुरी छ । साथै ओलीले पहिलो कुरा त के बुझ्नुपर्छ भने, विगतमा माधव नेपालले उनको मानमर्दन गरेका थिए भन्दैमा अहिले उनले प्रतिशोध लिनु जायज होइन । दाहालसँग उनको मिल्ती थिएन विगतमा तर दाहाल उनीसँग मिसिन आएका हुन् । झलनाथको आफ्नै पीडा छ, त्यो पीडा पनि ओलीले बुझ्नु र सम्बोधन गर्नुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने ओलीको आफ्नै कार्यशैली र प्रस्तुतिका कारण उनकै पार्टीको नेतृत्व र कार्यकर्तापंक्तिमा उनका विरुद्ध चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो ।
त्यस्तै असन्तुष्टि जनस्तरमा पनि छ । यो त विदितै छ, सरकारको चरम लापरबाही, हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको बिगबिगीका कारण कोरोना भाइरस संक्रमण विस्तार नियन्त्रित हुन सकेको छैन । क्वारेन्टिनहरू वधशालाजस्ता बन्न गएका छन्, असुरक्षा बढ्दो छ । जनजीविकामा अनिश्चितता, असुरक्षामा बढोत्तरी, लकडाउनका कारण उत्पन्न अवसाद, व्यावसायिक असफलता र राज्यबाट जीवन धान्नसम्मको कुनै सहयोग नभएका कारण देशमा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या भयावह रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । पर्याप्त समय र अवसर पाउँदापाउँदै पनि कहिले वैज्ञानिक रूपमा अपुष्ट चिकित्सकीय सल्लाह दिने र आफैं हाँसोको पात्र बन्ने काम गरेकाले प्रधानमन्त्री पदकै अवमूल्यन भएको छ ।
आफैंले प्रधानमन्त्री पदको अवमूल्यन गरेकाले जनतामा असन्तोष बढेको, असन्तोष बढ्दा अरू आकांक्षी, विशेष गरेर पूर्वहरूको हौसला बढेको हो । त्यसैले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वलाई सुरक्षित बनाउन उनले पहिला त सरकारको कार्यकुशलता वृद्धि गर्नुपर्छ,
आफ्नो वाणीमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ र पार्टीमा विद्यमान पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको इगोलाई काम दिएर व्यस्त बनाउनुपर्छ । अर्थात्, पूर्वहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अन्यथा पूर्वहरूको पराक्रम बारम्बार प्रकट भइरहनेछ । फलस्वरूप उनीमाथि संकटको कालो बादल मडारिइरहनेछ ।
प्रकाशित : असार २६, २०७७ १०:०१